Endrik'io pejy io tamin'ny 10 Jolay 2019 à 11:00
267 octets ajoutés , il y a 2 ans
Endrik'io pejy io tamin'ny 11 Febroary 2019 à 14:37 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 10 Jolay 2019 à 11:00 (hanova) (esory)
Ny [[Anjara asa (fitsipiteny)|'''anjara''' '''asa''']] dia ny karazam-pifandraisana sy fifampiakinana misy eo amin'ny teny na andian-teny sy ny teny na andian-teny fototra mikambana ao amin'ny andian-teny lehibe kokoa (izay mety ho [[tarika]] na [[fehezankevitra]] na [[fehezanteny]]). Ireto ny anjara asa mateti-pitranga ao amin'ny fehezanteny: ny [[entimilaza]] sy ny [[Lazaina (fitsipiteny)|lazaina]] ary ny [[Fameno (fitsipiteny)|fameno]]. Amin'ny fitsipiteny malagasy, ankoatra ny entimilaza sy lazaina ary ny fameno, dia avahana koa ao amin'ny fehezanteny ny reny lazaina sy ny anazana-daainadazaina, ny reny entimilaza sy ny anakzanak'entimilaza, ny reny fameno sy ny zana-pameno.
Ny [[entimilaza]] na vara dia anjara asan'ny teny na andian-teny anambaràna ny asa atao na ny asa mihatra amin'ny zavatra ambara amin'ny teny mitana ny anjara asa [[Lazaina (fitsipiteny)|lazaina]], na koa anambaràna ny toetrany na ny misy azy na ny fifandraisany amin'ny zavatra hafa.
Ny [[matoanteny]] matetika no misahana ny anjara asa entimilaza nefa afaka misahana izany koa ny [[mpamari-toetranatoetra]] na ny [[anarana]] na ny [[Mpisolo (fitsipiteny)|mpisolo]] sns arakaraka ny fiteny ka mety mila na tsy mila fampiasana [[matoanteny mpampikambanaandry]] izany. Ny ankamaroan'ny boky mampianatra fitsipitenin'ny fiteny sasany ao Eoropa ([[fiteny frantsay]], [[Fiteny anglisy|anglisy]] sns) dia mampifangaro ny hoe "matoanteny" (izay [[sokajin-teny]]) amin'ny hoe "entimilaza" (izay [[Anjara asa (fitsipiteny)|anjara asa]]<nowiki/>n'ny teny) ka mampianatra fa ny [[fehezanteny]] feno dia ahitana matonteny sy lazaina ary fameno.
Ny [[Lazaina (fitsipiteny)|lazaina]] dia anjara asan'ny teny misahana ny fanaovana ny asa na tompon'ny toetra resahina ao amin'ny [[fehezanteny]] tsotra amin'ny fiendrika manano.
Ny lazaina dia matetika [[anarana]].
Ny [[Fameno (fitsipiteny)|fameno]] dia anjara asan'ny teny na andian-teny miankina amin'ny teny na andian-teny iray hafa ao anaty fehezanteny na tarika.
== Anjara asan'ny zanateny ==
Ny [[zanateny]] dia teny atao hilazana ny anjara asan'ny teny hafa na natao hampifandraisana teny roa hafa ao anaty tarika na fehezankevitra na fehezanteny. Sokajin-teny maromaro ny zanateny, dia ny [[Mpampitohy (fitsipiteny)|mpampitohy]], ny [[mpampiankina]], ny [[Mpisolo (fitsipiteny)|mpisolo]], ny [[Mpamaritra (fitsipiteny)|mpamaritra]] sasany (tsy isany ny mpamari-toetra), ny [[mpanoritra]], sns. Matetika dia tokana anjara asa ny zanateny sady mifangaro amin'ny anaran'ny anjara asany ny anarany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/972070"